Malunga neNdlu yabameli be-US
E Pluribus Unum kwiNtshukumo
IUnited States yilizwe elikhulu, elibhubhileyo, elincinci kwaye lisahlangeneyo, kwaye ambalwa amagosa karhulumente abonakalisa ukuphazamiseka kweli lizwe elingcono kuneNdlu yabameli .
INdlu yincinci yamabhunga omthetho amabini eorhulumente wase-US. Unamalungu angama-435, kunye nenani labameli ngabarhulumente ngokuxhomekeke kuluntu lwabantu. Amalungu eNyanga asebenza ngeminyaka emibini.
Esikhundleni sokumela lonke ilizwe, njengamalungu eSenate , abamele isithili esithile. Oku kufaka ukunika amalungu eNdlu unxibelelwano olusondeleyo kumalungu abo-kunye nokuziphendulela ngakumbi, kuba baneminyaka emibini kuphela ukuba banelise abavoti ngaphambi kokuba baqhutyelwe ukunyulwa kwakhona.
Kwakhona kuthiwa yi-congressman okanye i-congresswoman, imisebenzi yamalungu ephambili ibandakanya ukufaka iindleko kunye nezigqibo, ukunikezela izilungiso kunye nokukhonza kwiikomiti.
I-Alaska, eNorth Dakota, eMzantsi Dakota, eMontona nase-Wyoming, zonke iindawo ezizityhilayo kodwa ezixhamlileyo, zinommeli omnye kwiNdlu; amazwe amancinci afana neDelaware kunye neVermont abuye athumele ummeleli omnye kwiNdlu. Ngokwahlukileyo, iCalifornia ithumela abameli abangama-53; I-Texas ithumela 32; INew York ithumela i-29, neFlorida ithumela abameli abangama-25 kwiCapitol Hill. Inani labameli ngalinye likarhulumente linikezelwe liyakunikwa yonke iminyaka eyi-10 ngokuhambelana nokubalwa kwabantu .
Nangona inani liye latshintsha ngamaxesha ngamaxesha, iNdlu iye yahlala kumalungu angama-435 ukususela ngo-1913, kunye nokutshintshwa kwezinto ezibonakalayo phakathi kwamazwe ahlukeneyo.
Inkqubo yeNdlu yokumelwa ngokusekelwe kwintsimi yesithili yayiyinxalenye yeNtsebenziswano enkulu yeNqunquthela yoMgaqo-siseko ngo-1787, leyo eyakhokelela kwisiKho esiPhezulu soMgaqo-kaRhulumente esisekela i-capital-federal capital of state, eWashington, DC.
Indlu yabuthana okokuqala eNew York ngo-1789, yafudukela ePhiladelphia ngo-1790 yaya eWashington, DC, ngowe-1800.
Nangona ubulungu obukhethekileyo beSenate bungenza ukuba kubonakale kunamandla kwamagumbi amabini eCongress, iNtyala ityala ngomsebenzi obalulekileyo: amandla okunyusa imali ngenkokhelo .
INdlu yabaBameli nayo inamandla okuphambuka , apho umongameli ohleliyo, i-vice-president okanye amanye amagosa karhulumente anjengejaji angasuswa "ngenxa yezopolitiko eziphakamileyo kunye nabangalunganga ," njengoko kuboniswe kuMgaqo-siseko. INdlu iyona nto inoxanduva lokubiza ukuphambuka. Xa sele ikhetha ukwenza njalo, iSeti iyazama ukuba igosa ukuba liqinisekise ukuba kufuneka ligwetywe, oko kuthetha ukuthathwa ngokuzenzekelayo kwi-ofisi.
Ubunkokeli bezindlu buhlala kunye nesithethi sendlu , ngokuqhelekileyo ilungu eliphezulu leqela elikhulu. Isithethi sisebenzisa iMithetho yeNdlu kwaye ibhekisela iibhilile kwiikomiti ezithile zeNdlu zokuhlaziywa. Isithethi sinesithathu kumgca kumongameli, emva kwesekela likamongameli .
Ezinye izikhundla zobunkokheli ziquka iinkokheli ezininzi kunye nezincinci ezijongene nomsebenzi wezomthetho phantsi, kunye nesininzi kunye nesincinci ezinokuthi ziqinisekise ukuba amalungu eNdlu avote ngokwezikhundla zabo.
Inkqubo yeKomiti yeNdlu
INdlu iyahlula yaba ngamakomiti ukuze ihlangabezane nemiba enzima kunye nemiba eyahlukileyo. Iikomiti zeNdlu zifundela iibhilidi kwaye zibambe iintlanganiso zomphakathi, ukuqokelela ubungqina beengcali kunye nokuphulaphula abavoti. Ukuba ikomiti iyavuma i-bill, ibeka phambi kweNdlu yonke ingxoxo.
Iikomiti zeNdlu zitshintshile kwaye zashintsha ngokuhamba kwexesha. Iikomiti zangoku ziquka ezo:
uhlahlo lwabiwo-mali, imfundo kunye nemisebenzi;
amandla kunye nentengiso;
khu seleko lomhlaba ;
ulawulo kunye nokulungiswa koorhulumente;
isayensi kunye nobuchwepheshe;
imigangatho yokuziphatha esemthethweni;
zokuthutha kunye neziseko;
imicimbi yezilwanyana; kwaye
Ukongeza, amalungu eNdlu angasebenza kwiikomiti ezidibeneyo kunye namalungu eSenate.
Njengoko kumalungu amancinci amalungu eNdlu, ukusondelelaniswa kwazo kunye namaqela aphezulu, iNdlu ngokuqhelekileyo iyanqabana kwaye inxaxheba kwamagumbi amabini . Iintlanganiso kunye neengxoxo, njengalezo zeSenate, zibhaliswe kwiNgxelo yeCongress, ukuqinisekisa ukungafihli kwinkqubo yomthetho .
Iimfanelo zokuba nguMmeli waseMelika
Hlangana neAnglish Angel Ridwan, Angel Angel of Paradise
Ubomi bukaBuddha, uSiddhartha Gautama
Indlela yokudibanisa "Ukubuza" (Ukukhathazeka) ngesiFrentshi
Isithethe seNyanga epheleleyo
Liliphi Ithenda elithi "Amanzi aQinisiweyo" asho kwiScuba Diving?
Ukuboniswa KwamaRoma Kwabantwana
Izilwanyana ezibalulekileyo zaseMntla Melika
Xa u-Stalking Uhamba Nge-Intanethi - Imizekelo ye-Cyberstalking
Indlela Yokubamba Okulungileyo Ukukhonza Xa Udlala I-squash
Ziqhelise ekuKhankeni iCompound Subjects
Ububele Bothando (Metta)
Ukusetha i-Deck Deck ye-Downhill Longboarding